Falanqeynta Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee Premier League Ee Manchester City v Arsenal. - jornalizem
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee Premier League Ee Manchester City v Arsenal.
Kulanka: Man City v Arsenal
Waqtiga:6da maqribnimo xilliga Soomaaliya.
Oxlade-Chamberlain, Gervinho, Podolski
Manchester City ayaa laga yaabaa inay dib line-upkeeda ugu soo dhaweyso Sergio Aguero ka dib markii uu kursiga keydka fadhiyay kulankii Real Madrid, laakiin waxaa la filayaa kulanka maanta inuu ku soo laabto.
Samir Nasri oo dhaawac uu ku soo gaaray Santiago Bernabeu ayaa la filayaa inuu garoomada ka maqnaado muddo isbuucyo ah.
Pablo Zabaleta ayaa isna la filayaa inuu ku soo laabto taam ahaanshihiisa buuxa, halka daafaca kale Micah Richards ayaa weli ku maqan dhaawac waqti dheer.
Goolhaye Wojciech Szczesny ayaa diyaar u ah in loo soo xusho kulankaan, ka dib markii goolhayaha da’da yar uu ka maqnaa kulankii Montpellier, lakiin Arsene Wenger ayaa laga yaabaa inuu ka doorto Vito Mannone, iyadoo ciyaaryahanka Talyaaniga uu qabtay shaqo fiican seddex kulan oo uu goolka ilaalinayay.
Jack Wilshere iyo Emmanuel Frimpong ayaa labadoodaba ku soo laabtay tababaraka kooxda Gunners isbuucaan, lakiin labada ciyaaryahan ayaa weli isbuucyo u jira inay ciyaaraan.
Bacary Sagna iyo Tomas Rosicky ayaa iyagana weli dhaawac ah, iyadoo kulanka 6da October ee West Ham laga yaabo inay garoomada ku soo laabtaan.
Seddex kulan oo dhexmaray Manchester City iyo Arsenal xilli ciyaareedklii hore ayaa dhamaantood ku dhamaaday 1-0.
Kooxda horyaalka difaacaneysa ayaa badisay 29 kulan oo ay garoonkeeda ku ciyaartay, iyadoo 31dii kulan ee u danbeysay ee Premier League ee ay ku ciyaareen Etihad Stadium aan dhinacooda dhulka la dhigin.
Waxaa jiray afar kaar oo casaan ah, afartii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League ee labada kooxood.
Ciyaaryahanka khadka dhexe Santi Cazorla ayaa u abuuray saaxiibo uu la ciyaarayo goolal in ka badan ciyaaryahan kale (14).
Gunners ayaa laga badiyay kaliya hal kulan 10kii kulan ee ugu danbeysay ee ay marti ahaayeen.
Garsooraha maanta waa Mike Dean, waxaana ay Arsenal badisay kaliya hal kulan 14kii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League ee uu garsoorahan dhexdhexaadiye ka noqdo.